မြန်မာနိုင်ငံမှ သူ​ဌေးကြီးတစ်​ဦးဖြစ်​​သော ​​ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ကမ္ဘာကတောင်လာပြီး​တော့ မှတ်တမ်းတင်နေကြပြီ - Maythadin
May Thadin | October 9, 2020 | Celebrity, COVID-19 Information, International News, Local News | No Comments
UNOPS, WHO နှင့် ICRC ၏ အကြံပေးကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများမှ ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်း၏ ကိုဗစ်ကုသရေးစင်တာသို့ လာရောက်လေ့လာခဲ့ကြ။
WHO. UNOPS နှင့် ICRC ၏ အကြံပေးကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများမှ ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်း၏ ကိုဗစ်ကုသရေးစင်တာသို့ လာရောက်လေ့လာကာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ COVID-19 ကပ်ရောဂါ တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်မှု လုပ်ငန်းစဉ် အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ရန်
ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန (MOHS) ၏ ခွင့်ပြုမှုဖြင့် ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းသည်နိုင်ငံတကာ NGO အဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တို့ဖြင့် ရေရှည် လက်တွဲပူးပေါင်းမှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကာအဆိုပါအဖွဲ့အစည်းများမှ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ COVID-19 ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် နည်းပညာပိုင်း၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအပိုင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကို ပံ့ပိုးကူညီပေးသွားမည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၇) ရက်၊ ရန်ကုန် ကုလသမဂ္ဂစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာရုံး (UNOPS)၊
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီကော်မတီ (ICRC) အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များသည် ရန်ကုန်မြို့၊ သုဝဏ္ဏအားကစားကွင်းတွင်တည်ရှိပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အစောဆုံးစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းကိုဗစ်ကုသရေးစင်တာသို့
အောက်တိုဘာလ (၆)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး အသစ်ဖွင့်လှစ်တော့မည့် ICU/HDU unit ဧရာဝတီစင်တာ (C)အားပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုနှင့် စက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ထားရှိမှုတို့ကို လေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။ လာရောက်လေ့လာကြသောပညာရှင်များနှင့်
တာဝန်ရှိသူများအား ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ခံဆရာဝန်ကြီးများနှင့် ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်မှ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး၊ ဧရာဝတီစင်တာ၏ လည်ပတ်နေပုံအဆင့်ဆင့်ကို အသေးစိတ်လိုက်လံရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်ဧရာဝတီစင်တာ၏ရောဂါကုသရေးနှင့်
COVID-19 ရောဂါပိုးစစ်ဆေးမှုအပိုင်းတို့အား အရှိန်အဟုတ်မြှင့်တင်ရန်နှင့် COVID-19 ကပ်ရောဂါ၏ ဒုတိယလှိုင်းတွင် ရောဂါပျံ့ပွားမှုကို ပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် ရည်ရှည်လက်တွဲပူးပေါင်းမှုများလုပ်ဆောင်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ဆွေးနွေးမှုတွင် ICU/HDU Critical Care unitရှိ
ဆေးဘက်ဆိုင်ဝန်ထမ်းများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုအား အထောက်အပံ့ပေးရန် ပံ့ပိုးကူညီမည့် နည်းလမ်းများကို ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး UNOPS မှ တာဝန်ရှိသူများက ဧရာဝတီစင်တာမှ လိုအပ်သော သင်တန်းပို့ချမှုများနှင့်ကုသရေးအတွက် ပစ္စည်းများကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အခုလို​တွေ့ဆုံမှု့မတိုင်ခင် Max Myanmar Group ၏ ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဦးဇော်ဇော်သည် အောက်တိုဘာလ (၃) ရက်နေ့တွင် UNOPS နှင့် WHO မှ ပညာရှင်များနှင့် အွန်လိုင်းမှ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကာ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ် ကုသရေးအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မည့်
နည်းလမ်းများကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ပါသည်။WHO မှ ICU တွင် လိုအပ်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်မည့် ဆရာဝန်၊ သူနာပြုများနှင့် မေ့ဆေးပညာ၊ ဓါတ်ခွဲခန်းပညာရပ်များအတွက် အွန်လိုင်းသင်တန်းများပို့ချမှုတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ UNOPS မှ
procurement, logistics, infrastructure ပိုင်းများတွင် ပါဝင်အားဖြည့်ကူညီကာနိုင်ငံတကာမှ အလှူရှင်များနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်နိုင်ရန် ပံ့ပိုးပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ICRC မှ ICU ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကို ပံ့ပိုးကူညီပေးသွားမည်ကြောင်း အသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြသည်။
“ဧရာဝတီစင်တာဟာ ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ Max Myanmar တို့ရဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု တစ်ခုတည်းကြောင့်သာမဟုတ်ဘဲ မြန်မာပြည်သူလူထုကို ကူညီရန်အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန နဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တို့မှလိုအပ်သောစီမံညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့
ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေရဲ့ စုပေါင်းအားထုတ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းအမီကုသမှုတွေ ပေးနိုင်ဖို့အတွက် UNOPS, WHO တို့နဲ့ လက်တွဲကာ COVID-19 ကပ်ရောဂါပိုးကို မြန်မာနိုင်ငံကနေ တိုက်ထုတ်ပေးသွားဖို့ ပြည်သူတွေနှင့်အတူ
အကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဦးဇော်ဇော်မှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဧရာဝတီစင်တာကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့်ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းတို့ပူးပေါင်းကာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံနေရသည့် လူနာများကို ယာယီကုသမှုပေးနိုင်ရန်
စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါသည်။ ကနဦးပိုင်းတွင် (၄၂၅) ခုတင်ဆန့်သော ကုသရေးစင်တာကို စက်တင်ဘာလ (၁၉) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာလ (၂၅) ရက်နေ့တွင် (၅၇၅) ခုတင်အထိ တိုးချဲ့နိုင်ခဲ့၍ အောက်တိုဘာလ (၃) ရက်နေ့တွင်တော့
(၈၇၅) ခုတင်ကုသရေးစင်တာအဖြစ် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ မကြာမီအချိန်တွင်လည်း (၇၅) ခုတင်ဆန့် ICU/HDU Critical Care Unit ကိုလည်းထပ်မံဖွင့်လှစ်နိုင်တော့မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းအနေနှင့် ဧရာဝတီစင်တာမှ တဆင့် နိုင်ငံတကာမှကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ
ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ လုပ်အားပေးများဖြင့်စုပေါင်းကာမြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွင်၊ ၎င်းတို့၏အသိပညာများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုအသုံးချနိုင်မည့်အခွင့်အရေးကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် ICU/HDU များအတွက်
အထူးလေ့ကျင့်ထားသည့် အတွေ့အကြုံရင့် ဝန်ထမ်းများ ထားရှိတာဝန်ပေးရန် လုပ်ဆောင်နေပြီး၊ ဖောင်ဒေးရှင်းအနေနှင့် နေရာထိုင်ခင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် အကူအညီပေးလိုသော ပါတနာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားသော နိုင်ငံတကာမှ ကျွမ်းကျင်လုပ်အားပေးအဖွဲ့များကို ကြိုဆိုလျက်ရှိပါသည်။ ခရက်​ဒစ်​
UNOPS, WHO နှငျ့ ICRC ၏ အကွံပေးကိုယျစားလှယျမြားနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားမှ ဧရာဝတီဖောငျဒေးရှငျး၏ ကိုဗဈကုသရေးစငျတာသို့ လာရောကျလလေ့ာခဲ့ကွ။
WHO. UNOPS နှငျ့ ICRC ၏ အကွံပေးကိုယျစားလှယျမြားနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားမှ ဧရာဝတီဖောငျဒေးရှငျး၏ ကိုဗဈကုသရေးစငျတာသို့ လာရောကျလလေ့ာကာ မွနျမာနိုငျငံ၏ COVID-19 ကပျရောဂါ တှနျးလှနျတိုကျခိုကျမှု လုပျငနျးစဉျ အရှိနျအဟုနျမွှငျ့တငျရနျ
ဆှေးနှေးတိုငျပငျပွီးကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာန (MOHS) ၏ ခှငျ့ပွုမှုဖွငျ့ ဧရာဝတီဖောငျဒေးရှငျးသညျနိုငျငံတကာ NGO အဖှဲ့အစညျးမြား၊ တိုငျးဒသေကွီးအစိုးရအဖှဲ့တို့ဖွငျ့ ရရှေညျ လကျတှဲပူးပေါငျးမှုမြား ပွုလုပျသှားမညျဖွဈကာအဆိုပါအဖှဲ့အစညျးမြားမှ
မွနျမာနိုငျငံ၏ COVID-19 ရောဂါတိုကျဖကျြရေးအတှကျ နညျးပညာပိုငျး၊ ထောကျပံ့ပို့ဆောငျရေးအပိုငျးနှငျ့ ကြှမျးကငျြပညာရှငျမြားကို ပံ့ပိုးကူညီပေးသှားမညျ။ ၂၀၂၀ ခုနှဈ၊ အောကျတိုဘာလ (၇) ရကျ၊ ရနျကုနျ ကုလသမဂ်ဂစီမံကိနျးလုပျငနျးမြားဆိုငျရာရုံး (UNOPS)၊
ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ (WHO) နှငျ့ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ကွကျခွနေီကျောမတီ (ICRC) အဖှဲ့အစညျးမြားမှ ကိုယျစားလှယျမြားသညျ ရနျကုနျမွို့၊ သုဝဏ်ဏအားကစားကှငျးတှငျတညျရှိပွီး၊ မွနျမာနိုငျငံတှငျ အစောဆုံးစတငျဖှငျ့လှဈခဲ့သညျ့ ဧရာဝတီဖောငျဒေးရှငျးကိုဗဈကုသရေးစငျတာသို့
အောကျတိုဘာလ (၆)ရကျနေ့ နံနကျပိုငျးတှငျ လာရောကျလညျပတျခဲ့ပွီး အသဈဖှငျ့လှဈတော့မညျ့ ICU/HDU unit ဧရာဝတီစငျတာ (C)အားပွငျဆငျဆောငျရှကျထားရှိမှုနှငျ့ စကျပစ်စညျးမြား တပျဆငျထားရှိမှုတို့ကို လလေ့ာကွညျ့ရှုခဲ့ကွသညျ။ လာရောကျလလေ့ာကွသောပညာရှငျမြားနှငျ့
တာဝနျရှိသူမြားအား ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာနမှတာဝနျခံဆရာဝနျကွီးမြားနှငျ့ ဧရာဝတီဖောငျဒေးရှငျး ဥက်ကဋ်ဌ ဦးဇျောဇျောမှ လကျခံတှဆေုံ့ခဲ့ပွီး၊ ဧရာဝတီစငျတာ၏ လညျပတျနပေုံအဆငျ့ဆငျ့ကို အသေးစိတျလိုကျလံရှငျးပွခဲ့ပါသညျ။ ထို့နောကျဧရာဝတီစငျတာ၏ရောဂါကုသရေးနှငျ့
COVID-19 ရောဂါပိုးစဈဆေးမှုအပိုငျးတို့အား အရှိနျအဟုတျမွှငျ့တငျရနျနှငျ့ COVID-19 ကပျရောဂါ၏ ဒုတိယလှိုငျးတှငျ ရောဂါပြံ့ပှားမှုကို ပိုမိုထိနျးခြုပျနိုငျရနျအတှကျ ရညျရှညျလကျတှဲပူးပေါငျးမှုမြားလုပျဆောငျရနျ ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။ ဆှေးနှေးမှုတှငျ ICU/HDU Critical Care unitရှိ
ဆေးဘကျဆိုငျဝနျထမျးမြား၏ ကြှမျးကငျြမှုအား အထောကျအပံ့ပေးရနျ ပံ့ပိုးကူညီမညျ့ နညျးလမျးမြားကို ဆှေးနှေးခဲ့ပွီး UNOPS မှ တာဝနျရှိသူမြားက ဧရာဝတီစငျတာမှ လိုအပျသော သငျတနျးပို့ခမြှုမြားနှငျ့ကုသရေးအတှကျ ပစ်စညျးမြားကိုလညျး ပံ့ပိုးပေးသှားမညျဖွဈကွောငျးပွောကွားခဲ့သညျ။
အခုလိုတှဆေုံ့မှု့မတိုငျခငျ Max Myanmar Group ၏ ဥက်ကဌဖွဈသူ ဦးဇျောဇျောသညျ အောကျတိုဘာလ (၃) ရကျနတှေ့ငျ UNOPS နှငျ့ WHO မှ ပညာရှငျမြားနှငျ့ အှနျလိုငျးမှ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးကာ COVID-19 ဗိုငျးရပျဈ ကုသရေးအတှကျ အကောငျးဆုံးဖွဈမညျ့
နညျးလမျးမြားကို ဆှေးနှေးတိုငျပငျခဲ့ပါသညျ။WHO မှ ICU တှငျ လိုအပျသော ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှုပေးနိုငျမညျ့ ဆရာဝနျ၊ သူနာပွုမြားနှငျ့ မဆေ့ေးပညာ၊ ဓါတျခှဲခနျးပညာရပျမြားအတှကျ အှနျလိုငျးသငျတနျးမြားပို့ခမြှုတှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈပွီး၊ UNOPS မှ
procurement, logistics, infrastructure ပိုငျးမြားတှငျ ပါဝငျအားဖွညျ့ကူညီကာနိုငျငံတကာမှ အလှူရှငျမြားနှငျ့လညျး ခြိတျဆကျနိုငျရနျ ပံ့ပိုးပေးသှားမညျဖွဈပွီး ICRC မှ ICU ကြှမျးကငျြပညာရှငျနှငျ့ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးမြားကို ပံ့ပိုးကူညီပေးသှားမညျကွောငျး အသီးသီးပွောကွားခဲ့ကွသညျ။
“ဧရာဝတီစငျတာဟာ ဧရာဝတီဖောငျဒေးရှငျးနဲ့ Max Myanmar တို့ရဲ့ ကွိုးပမျးအားထုတျမှု တဈခုတညျးကွောငျ့သာမဟုတျဘဲ မွနျမာပွညျသူလူထုကို ကူညီရနျအတှကျ ကနျြးမာရေးနှငျ့အားကစားဝနျကွီးဌာန နဲ့ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးအစိုးရအဖှဲ့တို့မှလိုအပျသောစီမံညှနျကွားခကျြတှနေဲ့
ပံ့ပိုးကူညီမှုတှရေဲ့ စုပေါငျးအားထုတျမှုဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ နိုငျငံတကာစံခြိနျစံညှနျးအမီကုသမှုတှေ ပေးနိုငျဖို့အတှကျ UNOPS, WHO တို့နဲ့ လကျတှဲကာ COVID-19 ကပျရောဂါပိုးကို မွနျမာနိုငျငံကနေ တိုကျထုတျပေးသှားဖို့ ပွညျသူတှနှေငျ့အတူ
အကောငျးဆုံးကွိုးစားသှားမှာဖွဈပါတယျ” ဟု ဦးဇျောဇျောမှ ပွောကွားခဲ့ပါသညျ။ ဧရာဝတီစငျတာကို ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာနနှငျ့ဧရာဝတီဖောငျဒေးရှငျးတို့ပူးပေါငျးကာ COVID-19 ရောဂါကူးစကျခံနရေသညျ့ လူနာမြားကို ယာယီကုသမှုပေးနိုငျရနျ
စတငျအကောငျအထညျဖျောခဲ့ပါသညျ။ ကနဦးပိုငျးတှငျ (၄၂၅) ခုတငျဆနျ့သော ကုသရေးစငျတာကို စကျတငျဘာလ (၁၉) ရကျနတှေ့ငျ စတငျဖှငျ့လှဈခဲ့ပွီး စကျတငျဘာလ (၂၅) ရကျနတှေ့ငျ (၅၇၅) ခုတငျအထိ တိုးခြဲ့နိုငျခဲ့၍ အောကျတိုဘာလ (၃) ရကျနတှေ့ငျတော့
(၈၇၅) ခုတငျကုသရေးစငျတာအဖွဈ ဆောငျရှကျနိုငျခဲ့ပါသညျ။ မကွာမီအခြိနျတှငျလညျး (၇၅) ခုတငျဆနျ့ ICU/HDU Critical Care Unit ကိုလညျးထပျမံဖှငျ့လှဈနိုငျတော့မညျဖွဈပါသညျ။ ဧရာဝတီဖောငျဒေးရှငျးအနနှေငျ့ ဧရာဝတီစငျတာမှ တဆငျ့ နိုငျငံတကာမှကနျြးမာရေးဆိုငျရာ
ကြှမျးကငျြပညာရှငျမြား၊ လုပျအားပေးမြားဖွငျ့စုပေါငျးကာမွနျမာနိုငျငံအတှကျ ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှုတှငျ၊ ၎င်းငျးတို့၏အသိပညာမြားနှငျ့ကြှမျးကငျြမှုမြားကိုအသုံးခနြိုငျမညျ့အခှငျ့အရေးကို အကောငျအထညျဖျော ဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈပါသညျ။ အဓိကအားဖွငျ့ ICU/HDU မြားအတှကျ
အထူးလကေ့ငျြ့ထားသညျ့ အတှအေ့ကွုံရငျ့ ဝနျထမျးမြား ထားရှိတာဝနျပေးရနျ လုပျဆောငျနပွေီး၊ ဖောငျဒေးရှငျးအနနှေငျ့ နရောထိုငျခငျး၊ သယျယူပို့ဆောငျရေးအတှကျ အကူအညီပေးလိုသော ပါတနာအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ အခွားသော နိုငျငံတကာမှ ကြှမျးကငျြလုပျအားပေးအဖှဲ့မြားကို ကွိုဆိုလကျြရှိပါသညျ။ ခရကျဒဈ
​ကျေးဇူးရှင်​မိဘကို လုပ်ကျွေးတဲ့သမီးမို့ ခက်ခဲနေချိန်မှာတောင် စေတနာအကျိုးပေးကောင်းပုံကို သက်သေနဲ့တကွ ပြောပြလာခဲ့တဲ့ ဘေဘီမောင်
တိုကျပှဲဝငျရငျး ကဆြုံး သှားခဲ့ရတဲ့ သူရဲကောငျးမြားရဲ့ ကနျြရဈ မိသားစု နအေိမျမြားဆီသို့ အလှူငှေ ဆယျသိနျး ကပျြစီ သှားရောကျ လှူဒါနျးခဲ့တဲ့ အဆိုတျော သရုပျဆောငျ မေ
ကိုဗစ်​ရောဂါကပ်​ဆိုးကြီးမပြီးမချင်း ​ရှေ့တန်းမှစေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေကို ထမင်းနဲ့ဟင်းအတွက် နေ့စဉ် လှူဒါန်းတော့မယ်​လို့ဆိုလာတဲ့ ခိုင်ခိုင်ကျော် ထမင်းဆိုင်
သူတို့နှစ်​ဦးရဲ့ မင်္ဂလာဦးညမှာ နန္ဒလှိုင် နဲ့ ရယ်စရာအဖြစ်အပျက်တခုကို ထုတ်ပြောချလိုက်တဲ့ ဦးဇေသီဟ